June 29, 2018 marqaan Maqal Iyo Muuqaal, Somaliland, Wararka Maanta 5
qaar ka Mid Ah saraakiisha Soomaliland ee Ku Sugan laascaanood Ayaa Cod laga Duubay Waxay Ku Muujiyeen Xaalada Ka Taagan Laascaano,waxyna Tilmaameen Inay Magaalada gacanta Ku Dhigtay Puntland beesha Dhulbahantena Hantidoodi Ku Wareejiyeen Puntland.
waxaa uu Sheegay Inay Puntland Saraakiisheeda La Kala Nadaley Iyadoona Saraakiil kale Laga Keenay Uganda Lagu Soo Tababaray,cabdiwali gaasna Kala Badaley.
halkani Riix Video Cod Sir
Hadba midaan bukaan qabin
Ma boqol baad u qaybsami.
Kala garo gadhowe iyo buurowadal
Baro xuduuda caalamaga ah
Gadhowe iyo buurowadal.
Oo sow adiga sirtii ba qarxiyay mise waa khiddad dagaal oo in lagu cabsi galiyo ay ujeeddadu tahay? Kaba soo gudub oo horta wadcigu sidii ay SNM-tu ugu barteen aad ayuu isaga beddelayaa. Dad badan baa is wayddiiya sida ay ku dhacday in ay SNM-tu ilaa heerkan iskugu kala ballaadhiyaan Laascaanood iyo nawaaxigeeda oo ay maleeshiyadoodu awooddan u yeeshaan. Jawaabuhu waa labo aad u sahlan.
1) In madaxdii Majeerteen ee Puntland isku harddinaysay uu khilaafkoodii meel xun ka gaaray oo isaga oo uu Cabdullaahi Yuusuf iyo Dhulbahantaha ku xumeynaya Cadde Muuse SNM-ta hoosta kala heshiiyay oo uu gacanta u galiyay. In waxii ka dambeeyay na Faroole uu ku dhici kari waayay in uu SNM-ta xumeeyo maadaama ay xidid hoose yihiin. Dhagarqabeyaasha SNM iyagu na fursadahaas dahabiga ah ee cirka uga soo dhacay ayay qumaati uga noolaadeen oo ay qaab straatijisan soonahaas iskugu fidiyeen ilaa iminka lagu ba dhici waayo.
2) In ay gaar ahaan Hartiga oo uu caalamku ugu cimaamadeeyay dowrka qaaliga ah ee dib u qotominta qaranka Soomaaliya ay dhayalsadeen dhagarta halista ah ee ay SNM-tu wadatay oo aanay filanin ba in ay kooxdaasu colaad iyo dagaal isu hubeynayaan inta ay Hartigu habsanka ku ahaayeen hawsha dib u dhiska qarannimada Soomaaliya. Hartiga waxaa nacasnimadooda maanka kaga qufulnaa fahamka qaldan ee ahaa Soomaaliyi colaad sokeeye way soo daashatay oo ma jiri doono qabiil dagaal dambe isu hubeyn doona. Sidaas ayaanay ba SNM-ta muhiimad gaar ah u siinin ilaa ay hadda kediso xaajo ku noqotay.
Haddaba xaalku aad ayuu isu beddelay maadaama ay Hartigu qaladkoodii straatijiga ahaa iyo ku hambabareen xaqiiqada dhabta ah ee dhanka Woqooyi Galbeed kaga beegnayd. Isku halleyntoodii Soomaalinimo ayaa cashar lama filaan ah u noqotay. Sool dhawaan waa la xoreyn doonaa ee su’aasha aniga weli igu taagan ee iigu na muhiimsani waxaa weeyaan maxaa xigi doona marka guushaas la gaadho. Libinta dhabta ahi waa ta colaaddan ka dambeysa ee Hartigu qorshaheedii ma u sii dhisan yahay mise kala yaac hore leh ayay ka dheefi doonaan?
NATIIJADI AFTIDI GUUD EE DADKA SOMALIYEED LAGA QAADAY
Qabiilka ugu tuugsan Somaliya………Habar gidir
Qabiilka ugu Boobka Badan………….Habar gidir
Qabiilka Isbaarada Jecel………………Habar gidir
Qabiilka Bililiqada Jecel……………….Habr gidir
Qabiil Guryihi muslinka dhacay………Habar gidir
Qabiilka ugu kufsi badan………………Habar gidir
Qabiilka aan waxba lagu Aamini Karin…Habar gidir
Qabiilka Xaaraanta Jecel………………Habar gidir
Qabiilka Masaajid Dhacay…………….Habar gidir
Qabiilka ugu indho adag………………Habar gidir
Qabiilka somali ceebeeyey……………Habar gidir
Qabiilka ummadda Qixiyey……………Habar gidir
Qabiilka ay somali xoog u nacday……Habar gidir
Qabiilka dhul muslin Boobay………….Habar gidir
Qabiilka Qabiil walba ku duuley……….Habar gidir
Qabiilka Xumaanta isku Raaca………..Habar gidir
Qabiilka magaalo walba ku duulay…….Habar gidir
Qabiilka somali sanka ka qabsato……..Habar gidir
Wareysigaas waa mid laga qaaday ummadda somaliyeed ee joogta somaliya
Haddii ay run tahay sheekada kor ku qoran waa sida loo baahan yahay in ay beesha Dhulbahante garato danaheeda dhabtaa.Maamulka Muuse biixina waa u dan in uusan isku layn wiilal dambe oo soomali ah oo uu dadkiisa meesha kala baxaa.Laascanood dhulbahantaa mulki u leh ayagayna jirtaan say u maamulayaan.Ama puntlan hala aadeen ama badda hala galeen.
Qawleysatada SNM waxaa u cad jeebabkooda iyo baatroolka Sool lagu tuhmayo. Calooshii la ciyaare oo dhammi waa khaa’in anaani iyo bakhiil ah ee aan waxba xeerinin – walaa nolol binu aadmi walaa nabad walaa wax kale ba. Habar Awashu hadda ayay ku soo biireen mooyaanee Habar Jeclada ayaa sanadihii la soo dhaafay kaga horreeyay oo aad na ugu xeeldheer shaxda ganacsiyada suuqa madoow ee caalamka ku xidhan.
Waxaa markii dambe la fahmay oo baratankan ku soo biiray Isaaqa kale iyo xataa ganacsato Jaamac Siyaad iyo Bahararsame isugu jira ee ay horseed u yihiin Cali Ussain Bolt iyo kooxdiisii ay khiyaanada khaatumo loogu magac darsaday isla soo hindiseen oo badankoodu Mareykanka ku nool. Kala qaybsanaanta Dhulbahante xataa baatroolkan ayuu waayaha dambe salka ku hayay. Sida muuqata qori caaraddii uun baa loogu kala bixi doonaa oo ninkii roon baa reerka u hadhi doona.